Saameynta uu European Super League ku leeyahay heshiis kordhinta Lionel Messi ee Kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 20 Abriil 2021. Ku dhawaaqista tartanka European Super League ayaa waji cusub ku kordhiyay hubin la’aanta mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona.
32-sano jirkaan ayaa heshiiskiisa garoonka Camp Nou waxa uu ku eg yahay bisha June, iyadoo aan wax war ah laga haynin heshiis kordhintiisa kooxda.
Messi, Aabihiis iyo wakiilka Jorge ayaa la filayaa inuu la kulmi doono Barcelona si ay u wada xaajoodaan, maadaama ay haatan kooxdu ku biirtay tartanka Super League.
Ka mid noqoshada mashruucan waxa ay dhaqaale weyn u tahay Barcelona oo kaliya ka qaybgalkeeda tartankan ku heli doonta 300 milyan oo euro, kooxda reer Catalan waxay awood u yeelan doontaa inay dhisato mashruuc isboorti oo u qalma inuu ku sii joogo Messi.
Si kastaba ha noqotee, marka dhinaca kale laga eego Messi ayaa hammuun badan u qaba inuu qarankiisa koob la qaado, waxaana caqabad ku noqon kara hanjabaada loo jeediyey xiddigaha ka qeyb galaya Super League, taasoo ka hor’istaagaysa inuu qarankiisa kala qeyb galo tartammo waa weyn.
Iyadoo Copa America iyo Koobka Adduunka la ciyaari doono 18 bilood ee soo aaddan, waxaa loo arkaa inay tahay fursaddii ugu dambeysay ee Messi uu qarankiisa Koob kula qaadi lahaa.
Haddii uu go’aansado inuu ka tago Barcelona, waxaa jira koox kale oo uu ku biiri karo si uu weli ugu ciyaaro qarankiisa, waxaana kooxahaas ka mid ah Paris Saint-Germain oo aan iyadu qeyb ka ahayn Super League.
Horudhac: Chelsea vs Brighton & Hove Albion... (Blues oo caawa guul u baahan si ay ugu dhaqaaqo afarta sare ee Premier League)